David James: 'Mohamed Salah Muhiim Kama Ahan Liverpool'
HomeHoryaalka IngiriiskaDavid James: ‘Mohamed Salah muhiim kama ahan Liverpool’
David James: ‘Mohamed Salah muhiim kama ahan Liverpool’
November 24, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Ciyaaryahankii hore ee Liverpool goolhaye David James ayaa uga sheegay Mohamed Salah in uusan lagama maarmaan Reds inkastoo uu qayb ka yahay kooxda Jurgen Klopp.
Salah ayaa ka mid noqday weeraryahanada hogaaminaya Premier League tan iyo markii uu yimid Anfield isagoo dhaliyay 104 gool 165 kulan oo uu ciyaaray tartamada oo dhan, oo ay ku jiraan sideed ka mid ah sideedii kulan ee ugu sareysay xilli ciyaareedkan.
Haatan, James ayaa uga digay Salah inuusan aheyn mid laga maarmi karo iyadoo ay jiraan warar la isla dhexmarayo oo ku saabsan inuu u dhaqaaqayo Real Madrid, isagoo u sheegay garoonka Stadium Astro : “Haddii qiimaha uu sax yahay, ciyaaryahan kasta waa la iibinayaa, waxay ku xiran tahay waxa uu yahay qiimahaas.
“Hadii uu Saalax aado Man City, uma maleynayo inay taasi ganacsi fiican u noqon laheyd Liverpool, hadii uu aadi lahaa horyaal kale iyo wadan kale, macno badan ayay sameyn laheyd.
“Uma maleynayo in Liverpool ay ku tiirsan tahay Salah taasina waa wax u fiican Jurgen Klopp. Sikastaba, wuxuu wali ubaahan doonaa bedelkiisa. Uma maleynayo in [Salah] looga maarmi karin.”
Tababaraha Reds Klopp ayaa xaqiijiyay in Salah uu haatan dib ugu soo laabtay tijaabada coronavirus-ka xun sidaas darteedna uu qarka u saaran yahay inuu ku soo laabto garoomada kulanka Champions League ee ay la ciyaarayaan Atalanta Arbacada.
Kaddib markii laga helay cudurka coronavirus intii lagu jiray fasaxii xulalka, Salah wax door ah kama uusan ciyaarin kulankii Leicester City.